Safal Khabar - गहुँको पिठोमा भ्याट लगाउने सरकारी निर्णयको विरोध
गहुँको पिठोमा भ्याट लगाउने सरकारी निर्णयको विरोध
शनिबार, २५ जेठ २०७६, १८ : ००
चितवन । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा गहुँको पिठो आटामा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने सरकारको निर्णयले नेपाल पूर्णरुपमा कृषि खाद्य वस्तु आयात देश बन्ने निश्चित भएको खाद्य उद्योगीहरुले बताएका छन् ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा गहुँको पिठोमा र मस्यौरामा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने सरकारको निर्णयले देशमै कृषि बिकास र प्रवद्र्धनका लागि सरकारको दुरदर्शी नीति नभएको प्रष्ट देखिएको खाद्य उद्योगी उमाशंकर अग्रवालले बताउनु भयो । सरकारको त्यो निर्णयबाट ३८ वटा स्वदेशी मैदा उद्योग जोखिममा पर्ने नेपाल मैदा उद्योग संघको दाबी रहेको र आफूहरुले पनि त्यही अवस्था सृजना हुने महसुस गरेको उहाँको भनाई छ ।
सरकारको यस किसिमको नीतिले भारतबाट आउने मैदा र आटासँग नेपाली उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था नरहने ब्यवसायीहरु बताउँछन् । स्वदेशमै आत्मनिर्भर भइसकेको आटाजस्तो खाद्य वस्तुमा यसरी करको भार थपिँदा आयातले प्रोत्साहन पाउने अग्रवाल तर्क गर्नु हुन्छ । सरकारले देश अब खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने घोषणा गरे पनि व्यवहारमा नदेखिएको कारण स्वदेशी उद्योगले अब थप चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको र मैदा उद्यमीहरु निरुत्साहित बनेको उहाँको भनाई छ ।
सरकारी नीतिका कारण अबका केही वर्षमा खाद्य उद्योगहरु धमाधम बन्द गर्नुको विकल्प नहुने उद्योगी चन्दन अग्रवालले बताउनु भयो । ‘आटा र गरीबले खाने सोयाबिन मस्यौरामा त सरकारले भ्याट लगायो भने अब बाँकी के रह्यो ?’ उहाँ प्रश्न गर्नु हुन्छ ।
सरकारको यो नीतिले करोडौंको लगानी गरेर उद्योग स्थापनामा जोखिम लिनुभन्दा ट्रेड व्यापारले प्रोत्साहन पाउने निश्चित भएको उहाँ तर्क गर्नु हुन्छ । यसको संकेत भोलिका दिनमा नेपाल पूर्णरुपमा कृषि खाद्य वस्तु आयात देश बन्ने नै देखिएको उहाँ दाबी गर्नु हुन्छ । न्यून आयस्तर भएका जनताको दैनिक खाद्यान्नको रुपमा खाने सोयाबिन र आटाजस्तो अत्यावश्यक खाद्य वस्तुमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउँदा करको भार उद्यमीमा मात्र नभएर उपभोक्तामा समेत पर्ने हुँदा सरकारले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनु पर्ने अग्रवालको सुझाव छ ।
मूल्य अभिवृद्धि करकै कारण अब आटाको मूल्य लगभग प्रतिकिलो ५ रुपैयाँदेखि ६ रुपैयाँसम्म बढ्न सक्ने ब्यवसायीहरुको भनाई छ । प्यानमा खरिद गरेको पुरानो स्टक आटा अब कसरी भ्याटमा बिक्री गर्ने ? के आधारमा सरकारलाई भ्याट तिर्ने ? त्यो पनि समस्या भएको उहाँ बताउनु हुन्छ । सरकारकै कारण महंगी बढेको र सरकारले काम अर्कै कुरा अर्कै गर्ने गरेकाले कृषिमा आत्मनिर्भर भन्ने कुरा पनि नारामात्रै भएको उहाँको ठहर छ ।
आटामा भ्याट लागेपछि भारतबाट अवैध रुपमा नेपालमा आटा भित्रिने र त्यसले गर्दा नेपालका उद्योगहरुलाई निकै ठुलो समस्या पर्ने कामधेनु एग्रो मिल चितवनका सञ्चालक राधेश्याम अग्रवालले बताउनु भयो । बाहिरबाट अवैध रुपमा आएको आटाले नेपालका उद्योगी धारासायी हुने र आटामा भ्याट लाग्दा प्रतिकेजी ६ रुपैयाँसम्म मूल्य बढ्न सक्ने हँुदा उपभोक्ता पनि ठुलो मारमा पर्ने उहाँको तर्क छ ।
मुनाल फुड्स तथा कस्तुरी आटा मैदा उद्योगका सञ्चालक शंकर सापकोटाले सरकारको यो निर्णयबाट उद्योगी हतोत्साही भएको बताउनु भयो । कहीँ नभएको काम यही देशमा भइरहेको भन्दै उहाँ सरकारको यो निर्णयले देशमा रहेका करिब ३८ वटा उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुग्ने तर्क गर्नु हुन्छ । खुल्ला सिमानाको मार अब उद्योगीले भोग्नु पर्ने र वृद्धवृद्धा रोगी बिरामीले खाने पिठोमा भ्याट लगाएर सरकारले निकै गलत काम गरेको उहाँ तर्क गर्नु हुन्छ । मिल सञ्चालकहरुको संगठनले पनि सरकारलाई यो निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गरिरहेको उहाँ बताउनु हुन्छ ।
सरकारले वृद्धभत्ता बढाएर वृद्धवृद्धालाई दिएको रकम त्यही वृद्धवृद्धाले खाने पिठोबाट असुल्न खोजेको आफूले अनुभूति गरेको उहाँको भनाई छ । सरकारले आफ्नो आम्दानी बढाउने नाममा केही वर्षअघि तोरीमा पनि १३ प्रतिशत भ्याट लगाएको र भ्याट लागेपछि साना सबैजसो तेल मिल बन्द भएको उहाँले स्मरण गर्नु भयो । त्यसयता नेपालमा तोरी उत्पादन पूर्ण रुपमा परनिर्भर बनेको बताउँदै उहाँले अब गहुँ र आटाको भविष्य पनि त्यस्तै हुने दाबी गर्नु भयो ।
सुनको मूल्य बुधबार पनि स्थिर
नेपाली बजारमा सुनको मूल्य बुधबार पनि स्थिर छ । छापावाल सुन बुधबार तोलामा ७१ हजार...
एनसेलका ग्राहकले अब कुनै पनि समय बिना...
वायुसेवा निगम डुबाउनुमा राजपरिवार जिम्मेवार, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहकै नाममा पाँच करोड रुपैयाँ बक्यौता
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले विभिन्न समयमा विमान चार्टर...
नेपाली बजारमा मंगलबार सुनको भाउ स्थिर रहेको...